Gawaarida kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka (ama terminal) | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan sii wadeynaa raadinta waddo aan kula shaqeyn karno terminal-ka mid fudud oo markaan, waxaan kuu sooqaatay taxane toobiyeyaal ah oo nolosheena ka farxin doona 😀
Ctrl-a Tag bilowga safka
Ctrl-e Aad dhamaadka safka.
Ctrl-b Hal dabeecad dib ugu laabo
alt-b Hal eray dib ugu noqo
Ctrl-f Ku hormari hal dabeecad
alt-f Hormar hal eray.
Alt-] x Ku sii soco dhacdada soo socota ee x.
Alt-Ctrl-] x Ku laabo dhacdadii hore ee x.
Ctrl-u Ka tirtir tilmaamaha illaa bilowga khadka
Ctrl-k Ka masax tilmaam ilaa dhamaadka khadka
Ctrl-w Ka tirtir tilmaamaha illaa bilowga ereyga
Ctrl-Shift-V Ku dhaji qoraalka sabuuradda
Ctrl-Shift-C Nuqul ka soo qor sabuuradda
Ctrl-l shaashadda tirtiraa
Ka raadi taariikhda ciyaartii ugu dambeysay ee xarfaha 'qoraalka'
Xaq ma leedahay? Haddii aad taqaanid wax kale oo toobiye ah, nala wadaag 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Gawaarida kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka (ama terminaalka)
Qoraalka Ctrl-r Raadi taariikhda (kiiskeyga ~ / .bash_history) ciyaarta ugu dambeysa ee xarigga 'qoraalka'
Ku jawaab Dav
Waa runtaa waan ku darayaa liiska .. Mahadsanid !!!
Hagaag, inbadan oo iskudhafkaas ah aniga igama aqoon. Mahadsanid.
Ku raaxayso !!
Linux_ R4 dijo
Waxaan u maleynayaa inaad uun seegtay furaha TAB si aad u buuxiso jidadka iyo amarrada.
Jawaab linuxman R4
Alt + Backspace waxay tirtirtaa erayga ugu horeeya kadib tilmaamaha. Wax badan baan qabsadaa ...
Si aad uga baxdo terminaalka (xir) Xakamaynta + d, taas oo lamid ah teeb garaynta "bixitaanka"
Anti-doping-ka ee Elav oo buuxa oo leh talooyinka. Aad u faa'iido leh tan. Mahadsanid!
Ku jawaab croto
Mahadsanid nin, waa farxad inaad wax ku biiriso wax faa'iido leh.
Runtii tani waa wax cusub ... Hadal la'aan baan ahay oo waa inaan yeelaa sida saaxiibkay KZKG ^ Gaara, oo aan jidka ku sii jawaabin e-maylkii aan u diray subaxnimadii
Waxaan hayaa labo emayl oo aad wali ka jawaabeyso, iyo 2daada kale 6 lol ... ilaa qoorteyda ayaan joogaa shaqada ... iyo, haddii aan kuu sheego waxa aan berri haysto, waxaan kuu ballan qaadayaa inaadan rumaysan doonin aniga lol.
Waayahay saaxiib, waan ogahay hawsha yar ee ilaalinaysa
desdelinux portal, ka jawaab su'aalaha, samee casharro, ka qaybgal
dhagsii, oo waxaan qiyaasayaa in madaxa gadaal, waa cadaabta (in kasta oo waxa ugu dambeeya weligood aan shaqeynin… .hehehehe), waxa dhaca qofku inuu doonayo inuu barto oo uu si fiican wax u barto, berri ayaan kuu soo dirayaa sida aan u sameeyay qoraalka, hadda waxaan guriga tag, Goormaad daabacaysaa "qoraal" kale?
Caawinaad heer sare ah !!! Mahadsanid Elav
Ku jawaab conandoel
Tani waxay i xasuusineysaa xoogaa maalmaheygii xenix iyo SCO unix, halkaasoo "ugu fiicnaa" sheygu ahaa inuu qolof kuuskuusnaado qadka amarka iyo inuu awood u yeesho inuu wax ka beddelo amarradii hore ee lagu fuliyay waa inaad xoogaa yareysaa tifaftiraha khadka ed . Ma jiraa qof xusuusta isaga ama yaqaan? mise durba waan gaboobay?
Jawaab Guido Rolon
Waa inay soo saaraan joornaal bille ah oo PDF ah oo ay la socdaan talooyinka.
Goor dhow waan fali doonaa, horay ayaan uga fikirnay .. 😛
wax ka beddel amarka qoraalka tifaftiraha!
geekismku ma laha xad
Isku-darka Ctrl + Alt + T wuxuu ku furayaa tab cusub barta-hoose.
Jawaab José R.
Paul Suarez dijo
Aad u xiiso badan. Sannado isticmaalka konsol-ka qaar badanna ma aqoon iyaga. Waa inaad aragto in wax walba aan la aqoon si kasta oo aad u isticmaasho maalin kasta. Mahadsanid
Jawaab Pablo Suarez
Si loo joojiyo iskaanka?
CTRL + c ee loogu talagalay hawsha socodsiinta terminaalkaas
Tirtirida feylal badan qaabka ugu fudud MC